Soomaali 16 sano ku xiran Taliyaaniga oo warbaahinta la hadlay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Soomaali 16 sano ku xiran Taliyaaniga oo warbaahinta la hadlay
19th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Muwaadin Soomaaliyeed oo dalka Taliyaaniga ku xiran muddo 16 sano ah ayaa markii ugu horreysay la hadlay warbaahinta Soomaaliyeed, gaar ahaan warbaahinta dowladda.
Xaashi Cumar Xasan oo 16 sano ku xiran Talyaaniga oo khadka teleefoonka kula hadlay RM kaddib markii loo ogolaaday in uu la hadli karo warbaahinta ayaa sheegay in lagu xiray si sharci darro ah kaddib markii maxkamad ku taala Tayaaniga ay 26 sano ku xukuntay sanadkii 1998-kii.
Wuxuu sheegay Xaashin in xukumay isagoo aan cidna dambi ka gelin, balse dusha laga saaray labo wariye oo u dhashay dalka Taliyaaniga sanadkii 1994-kii lagu dilay Muqdisho.
Muwaadinkan Soomaaliyeed oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in xoriyadiisu uu la yahay muddo 16 sano ah, islamarkaana lagu xadgudbay shaqsiyadiisa, waxaana dowladda Soomaaliya uu ugu baaqay in arrinkiisa ay wax ka qabtaan, isagoo sidoo kale u mahadceliyay guddiga arrimaha dibadda ee Baarlamaanka dalka oo wada qorshayaal xoriyada dhibane Xaashi loogu raadinayo.
Markii ugu horeysay Xaashi Cumar Xasan waxaa la xiray bishii Janaayo sanadkii 1998, waxaana lagu xiray dalka Talyaaniga, waxaana markii Muqdisho uu ka baxay lagu waday in magdhow dowladda Talyaaniga ay siineyso maadaama sida la sheegay uu ka mid noqday dad ciidamada Talyaaniga ee UNISOM ka socday ay dhibaateeyeen markii halkaasi uu tagayna lagu eedeyay, inuu ka dambeeyay dilka Saxafiyad u dhalatay Talyaaniga oo lagu magacaabo Ilaria Alpi iyo sawir qadaheeda Miran oo lagu dilay Muqdisho.
Aniga wax lug ah kuma lehayd dambiga la igu soo oogay, xiligii Muqdisho lagu dilayay maba joogin aniga’’ ayuu yiri Xaashi Cumar.
Ugu dambeyntii Qareenka u doodaya Xaashi ayaa dadaal badan u galay haddana ugu jira sidii xoriyadiisa uu u heli lahaa dhibane Xaashi, waxaana arrintiisa uu hordhigay Baarlamaanka dalka Talyaaniga oo uu u cadeeyay in kiiskan uu yahay mid cadaalad daro ah.
Booliska Soomaaliya oo gaari ku horjaray kolonyo Amisom, Sabab?
Dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay deeqo waxbarasho Jaamacadeed